Inqubomgomo Yobumfihlo Yewebhusayithi »I-Hodges University Admissions
Siyabonga ngokuvakashela iwebhusayithi kaHodges. IHodges University ilandela yonke imithetho nemithethonqubo njengoba kudingwa yiFlorida Statutes, imithetho yase-US Federal, kanye neGeneral Data Protection Regulation (GDPR). IHodges University ingatholakala online ku www.hodges.edu. Siphinde sibe nendawo yekhempasi eFort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Isayithi lethu linezinyathelo zokuphepha ezenzelwe ukuvikela ukulahleka, ukusetshenziswa kabi, kanye / noma nokuguqulwa kolwazi olulawulwa yithi. Senza yonke imizamo efanelekile ukubeka izivikeli ezifanele zomzimba, ze-elekthronikhi, nezokuphatha ukuze kuvikeleke ulwazi esiluqoqayo online. Kodwa-ke, inqubomgomo yobumfihlo yewebhusayithi kaHodges ayihloselwe ukuthathwa njengesithembiso senkontileka.
Siqoqa idatha enikezwe ngokuzithandela mayelana nabavakashi bewebhusayithi yethu ngokwakhiwa kwe-akhawunti, ukufaka isicelo, namafomu wokuxhumana athunyelwe ngaleli sayithi.
Ngokwengeziwe, sisebenzisa idatha yokulandela ngomkhondo iwebhusayithi ukuhlinzeka ngomuzwa womsebenzisi ongcono kakhulu. Siphinde sisebenzise amakhukhi kuwebhusayithi yethu ukuqondisa nokulungisa imininingwane ngokususelwa endleleni yakho yokungena esizeni. Leli sayithi liphinde liqoqe imininingwane yezimoto nezivakashi njenge-internet domain kanye nekheli le-inthanethi lekhompyutha oyisebenzisayo ngokusebenzisa amathuluzi ajwayelekile wezibalo zewebhu namathuluzi okulandelela. Imininingwane eqoqelwe ukusetshenziswa kwangaphakathi kuphela ukuxhasa ukubhaliswa kwabafundi, ukuphendula imibuzo yezivakashi zewebhusayithi, kanye nokuhlaziywa kwewebhusayithi.
Uma uphawula nganoma yini kuwebhusayithi yethu, uthumela ngokuzithandela ikheli lakho le-imeyili kanye neminye imininingwane. Lolu lwazi luzosetshenziselwa ukuthumela imininingwane yakho kusayithi lethu ngokuvumelana nokusetshenziswa njalo. Uma ungathanda ukuthi imininingwane yakho isuswe, sicela ucele ukususwa ngokuthumela i-imeyili lumela@hodges.edu. Ngeke sathengisa noma sidalule imininingwane yakho kubantu besithathu. IHodges University ihambisana nemithethonqubo esebenzayo yendawo, yezwe, neye-federal elawula ukuqoqwa nokugcinwa kwemininingwane yomuntu siqu. Ungakhetha ukuphuma kuzici zokukhangisa ze-Google Analytics ngezilungiselelo zezikhangiso ze-Google, izilungiselelo zesikhangiso zezinhlelo zokusebenza zeselula, noma ezinye izindlela ezikhona. Uma ungathanda ukukhubaza ukulandelwa kwewebhusayithi, sicela ulungise izilungiselelo ezisesipheqululini sakho ukuvimba ukulandela umkhondo.
Ukuxhumanisa nezinsizakusebenza zangaphandle ze-Intanethi, kufaka phakathi amawebhusayithi, kunikezwa ngenhloso yokwaziswa kuphela; azenzi ukuvuma noma ukugunyazwa yiHodges University kwanoma yimuphi umkhiqizo, izinsizakalo, noma imibono yenkampani, inhlangano, noma umuntu ngamunye. IHodges University ayinasibopho sokunemba, ukuba semthethweni, noma okuqukethwe kwesayithi langaphandle noma lelo lezixhumanisi ezilandelayo. Xhumana nesayithi langaphandle ukuthola izimpendulo zemibuzo ephathelene nokuqukethwe kwayo.
Yonke imininingwane ekuwebhusayithi yethu ihlinzekelwe ulwazi kuphela. IHodges ayincomi neze izinsizakalo ngokusebenzisa kwakho iwebhusayithi yethu. IHodges ibanjwe ingenabungozi kunoma yiziphi izinkinga ezingavela ngokuya ngemininingwane etholakala kuwebhusayithi yethu.
Iwebhusayithi yethu ingabuyekezwa nganoma yisiphi isikhathi. Izinhlelo zethu zeziqu kanye nezinhlelo zosizo lwezezimali zingalungiswa noma zishintshwe nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini.
Ngokuvamile, iwebhusayithi kaHodges yenzelwe ukuthi isetshenziswe ngabantu abadala, ngaphandle kokuthi ibhalwe ngokukhethekile izingane. UHodges akaqoqeli imininingwane eyimfihlo ezinganeni zakhe ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma sithola ukuthi siqoqe Imininingwane Eyimfihlo yengane engaphansi kweminyaka engu-13 engayinikwanga ngokuzithandela, sizoyisusa leyo datha ezinhlelweni zethu.
Yonke imininingwane equkethwe yile webhusayithi inamalungelo obunikazi ngaphansi kwe-Copyright Act ka-1976. Awukwazi ukusebenzisa noma yikuphi okuqukethwe kufaka phakathi, kodwa kungagcini lapho: izithombe, idatha ye-faculty, noma i-logo ngaphandle kwemvume evela eHodges University.
Uma ungumuntu ngaphakathi kwe-EU futhi usebenzisana noHodges kumongo walesi Saziso, i-GDPR inikeza ngamalungelo alandelayo. Ukuze usebenzise noma yiliphi lala malungelo, sicela uxhumane noMphathi Wezokuvikela Idatha eGloria Wrenn imisebenzi@hodges.edu..
Yaziswa - ukuqoqwa nokusetshenziswa kwedatha yakho echazwe lapha;
Cela ukufinyelela noma ulungise idatha yomuntu siqu engalungile ephethwe ngawe;
Cela ukuthi idatha yomuntu siqu isulwe lapho ingasadingeki noma uma ukuyicubungula kungekho emthethweni;
Ukuphikisana nokucutshungulwa kwedatha yomuntu siqu ngezinjongo zokumaketha noma ngezizathu eziphathelene nesimo sabo esithile;
Cela umkhawulo wokucubungula idatha yomuntu siqu ezimweni ezithile;
Thola imininingwane yakho ('ukuphatheka kwedatha');
Isicelo sokuthi ungabi ngaphansi kwesinqumo esincike ekucutshungweni okuzenzakalelayo kwedatha yomuntu siqu, kufaka phakathi ukuphrinta.
Imininingwane yomuntu izocutshungulwa kuphela lapho umthetho uvumela lokhu ukuthi kwenzeke. Kwezinye izimo, iHodges inganikeza olunye ulwazi mayelana nemisebenzi yayo yokucubungula ngesaziso sayo sokungezelela noma esihlukile. Ngokuvamile, idatha yomuntu siqu izocutshungulwa nguHodges ezimweni ezilandelayo:
Lapho usinikeze khona imvume yakho.
Ukuze ugcwalise izibopho zikaHodges kuwe njengengxenye yesivumelwano sakho sokuqashwa noma sokubhaliswa.
Lapho iHodges idinga ukuhambisana nesibopho esisemthethweni (ngokwesibonelo, ukutholwa noma ukuvinjelwa kobugebengu nemithethonqubo yezezimali).
Lapho kudingeka khona izintshisekelo ezisemthethweni zikaHodges (noma ezomuntu wesithathu) kanye nezintshisekelo zakho namalungelo ayisisekelo akweqisi lezo zithakazelo.
Ukuvikela izintshisekelo ezibalulekile zesifundo sedatha noma somunye umuntu (ngokwesibonelo, esimweni esiphuthumayo sezokwelapha).
Ukuze senze umsebenzi owenziwayo ukuze kuzuze umphakathi noma ukusetshenziswa kwegunya elisemthethweni esinikezwe lona.
Njengesikhungo semfundo ephakeme saseMelika, ukucubungula cishe yonke imininingwane yomuntu nguHodges kuzokwenzeka e-United States. Izivakashi kule webhusayithi ziyavuma ukuthi imininingwane yomuntu oyinikiwe noma eqoqwe ngewebhusayithi yayo izodluliselwa e-United States, futhi ngokuqhubeka nokusebenzisa leyo webhusayithi, uyavuma lokhu kudluliswa.
Uma unemibuzo mayelana nezinqubomgomo zethu maqondana nemigomo yakho yokusebenzisa, sicela uxhumane nathi ekhelini le-imeyilivuma@hodges.edu.